တရုတ် LED မီးလျှံအဝတ်လျှော်၏နည်းပညာနိယာမကဘာလဲ။ စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ REIDZ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း LED နံရံကပ်အဝတ်လျှော်စက်များကိုနေရာအမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကုမ္ပဏီနှင့်ကော်ပိုရိတ်အဆောက်အ ဦး များ၏နံရံအလင်းရောင်၊ အစိုးရအဆောက်အအုံများ၏အလင်းရောင်၊ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများ၏နံရံအလင်းရောင်၊ ဖျော်ဖြေရေးနေရာများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်အကွာအဝေးလည်းပိုမိုကျယ်ပြန်တိုးပွားလာသည်။ မူရင်းမိုးလုံလေလုံမှသည်အပြင်ဘက်သို့၊ မူလတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလင်းရောင်မှလက်ရှိခြုံငုံသောအလင်းရောင်အထိအဆင့်၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ LED နံရံဆေးကြောစက်သည်အလင်းရောင်စီမံကိန်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
1. High-power LED wall was ၏အခြေခံသတ်မှတ်ချက်များ
၁.၁ ။ ဗို့အား
LED wall washer ၏ဗို့အား 220V, 110V, 36V, 24V, 12V, အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် power supply ရွေးချယ်ရာတွင်သက်ဆိုင်ရာ voltage ကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးဂရုပြုပါသည်။
၁.၂ ။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်
၎င်းသည်နံရံအဝတ်လျှော်မှု၏အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လက်ရှိ guardrail ပြွန်၏အရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအရေးကြီးသောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုလုပ်ဖို့ရှိသည်။ အိမ်ပြင်တွင်၎င်းကို IP65 အထက်တွင်ထားရန်ရေစိုခံအဆင့်ကိုလိုအပ်သည်။ သက်ရောက်မှုရှိသောဖိအားခံမှု၊ ထုထည်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်အနိမ့်ဆုံးခုခံခြင်း၊ မီးလျှံခုခံခြင်း၊ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းအဆင့် IP65 ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်ဘေးအန္တရာယ်မှမပါဘဲရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်။
၁.၃ ။ အလုပ်လုပ်အပူချိန်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နံရံဆေးအဝတ်လျှော်များကိုအများအားဖြင့်အိမ်ပြင်တွင်ပိုမိုအသုံးပြုကြသောကြောင့်ဤအချက်သည် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်နိုင်သောပြင်ပအပူချိန် -40 ℃ + 60 တွင်လိုအပ်သည်။ သို့သော်အ ၀ တ်လျှော်ကိုအလူမီနီယမ်အခွံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူလွန်ကဲမှုကြောင့်ဒီလိုအပ်ချက်ကိုအထွေထွေနံရံဆေးကြောသူမှပြည့်မီနိုင်သည်။
အလင်းထုတ်လွှတ်သောထောင့်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျဉ်းမြောင်းသည် (၂၀ ဒီဂရီခန့်)၊ အလတ်စား (၅၀ ဒီဂရီခန့်) နှင့်အကျယ် (၁၂၀ ဒီဂရီခန့်) ရှိသည်။ လက်ရှိတွင်စွမ်းအားမြင့် ဦး ဆောင်သောနံရံကပ်အဝတ်လျှော် (ကျဉ်းသောထောင့်) ၏အဝေးဆုံးထိရောက်သောအကွာအဝေးအကွာအဝေးသည် ၂၀ မှ ၅၀ ဖြစ်သည်
၁.၅ ။ LED မီးခွက်ပုတီးအရေအတွက်
Universal နံရံကပ်အဝတ်လျှော်မှုအတွက် LEDs အရေအတွက်မှာ ၉/၃၀၀mm၊ ၁၈/၆၀၀mm၊ ၂၇/၉၀၀mm၊ ၃၆ / ၁၀၀၀mm၊ ၃၆ / ၁၂၀၀mm ဖြစ်သည်။
၁.၆ ။ အရောင်သတ်မှတ်ချက်များ
အပိုင်း (၂)၊ ၆ ပိုင်း၊ အပိုင်း (၄)၊ အရောင် (၈) ခု၊ အရောင်အဆင်း၊ အရောင်၊ အနီရောင်၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ ခရမ်း၊ အဖြူနှင့်အခြားအရောင်များ။
၁.၇ ။ မှန်
ဖန်ရောင်ပြန်ဟပ်မှန်ဘီလူး၊ အလင်းထုတ်လွှတ်မှု ၉၈-၉၈% ရှိပြီးမြူရန်လွယ်ကူသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုခုခံနိုင်သည်
၁.၈ ။ ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း
LED wall washer အတွက်ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းနှစ်ခုမှာ internal control နှင့် external control ။ Internal Control အဘယ်သူမျှမပြင်ပ controller ကိုမလိုအပ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဒီဇိုင်နာသည်နံရံမီးခွက်တွင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ ပြင်ပထိန်းချုပ်မှုသည်ပြင်ပထိန်းချုပ်သူဖြစ်ပြီးအဓိကထိန်းချုပ်မှုခလုတ်များကိုညှိခြင်းဖြင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်အကြီးစားစီမံကိန်းများတွင်ဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ပြင်ပထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုကြသည်။ DMX512 control systems များကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့သော wall washers များစွာရှိသည်။
၁.၉ ။ အလင်းအရင်းအမြစ်
ယေဘုယျအားဖြင့် 1W နှင့် 3W LEDs များသည်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်များအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်နုနည်းပညာကြောင့်လက်ရှိစျေးကွက်တွင် 1W ကိုအသုံးပြုရန် ပို၍ များသောကြောင့် 3W သည်ကြီးမားသောအပူပမာဏကိုထုတ်ပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပူအားပယ်ဖျက်သောအခါအလင်းသည်ပိုမိုလျင်မြန်စွာယိုယွင်းပျက်စီးသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ LED ပါဝါမြင့်မားသော Wall washer ကိုရွေးချယ်သောအခါအထက်ဖော်ပြပါ parameters များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အလင်းဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်အလင်းအမှောင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် LED tube မှထုတ်လွှတ်သောအလင်းကိုဒုတိယအကြိမ်ဖြန့်ဝေနိုင်ရန်အတွက် Wall Washer ရှိ LED ပြွန်တစ်ခုစီတွင် PMMA ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော High-Efficiency lens ရှိသည်။
2. LED wall wall ၏အလုပ်လုပ်သောနိယာမ
LED wall washer သည်အရွယ်အစားကြီးမားပြီးအပူလွန်ကဲမှုကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒီဇိုင်းပိုင်းတွင်အခက်အခဲများစွာရှိသည်။ လက်တွေ့ကျသောအသုံးချမှုများတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်သောလက်ရှိ drive သည်အလွန်မကောင်းကြောင်းနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိသည်။ ။ ဒီတော့မြို့ရိုးအဝတ်လျှော်မှုကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲ၊ အာရုံစိုက်မှုကထိန်းချုပ်မှု၊ မောင်းနှင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုနဲ့မောင်းနှင်မှုကိုအဓိကထားတာဖြစ်တယ်။
၂.၁ ။ စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ device ကို LED
LED high-power ထုတ်ကုန်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားစဉ်ဆက်မပြတ်တည်ရှိနေသော drive ကိုဖော်ပြထားသည်။ LED စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ drive ကိုကဘာလဲ? ဝန်၏အရွယ်အစားမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ LED စဉ်ဆက်မပြတ်၏ current ကိုထိန်းသိမ်းသောဆားကစ်ကို LED စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ drive ဟုခေါ်သည်။ အကယ်၍ 1W LED ကို Wall washer တွင်အသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် 350MA LED စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ drive ကိုအသုံးပြုသည်။ LED စဉ်ဆက်မပြတ် current drive ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည် LED ၏သက်တမ်းနှင့်အလင်းကိုလျော့နည်းစေရန်ဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိအရင်းအမြစ်၏ရွေးချယ်မှုသည်၎င်း၏ထိရောက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ငါစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည့်တတ်နိုင်သမျှမြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိအရင်းအမြစ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ကြိုးစားပါ။
၂.၂ ။ ဦး ဆောင်မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်၏လျှောက်လွှာ
အဓိကအသုံးပြုသည့်အခါသမယများနှင့်နံရံကပ်အဝတ်လျှော်မှု၏ရရှိနိုင်သောဆိုးကျိုးများ LED wall washer ကို built-in microchip မှထိန်းချုပ်သည်။ သေးငယ်သောအင်ဂျင်နီယာအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင်၎င်းကို Controller မပါဘဲအသုံးပြုနိုင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခြင်း၊ ခုန်ခြင်း၊ အရောင်တောက်ပခြင်း၊ ထိုသို့ပြောင်းခြင်းနှင့်စကင်ဖတ်ခြင်းကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိရန်ပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုများကိုလည်း DMX မှထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
၂.၃ ။ လျှောက်လွှာနေရာ
အသုံးပြုခြင်း - တစ်ခုတည်းသောအဆောက်အ ဦး၊ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများ၏အပြင်ဘက်နံရံမီးထွန်းခြင်း။ အဆောက်အ ဦး တွင်အလင်းကိုပြင်ပမှလည်းကောင်း၊ အစိမ်းရောင်ရှုခင်းအလင်းရောင်၊ LED နံရံဆေးကြောခြင်းနှင့်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အလင်းရောင်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဆောက်အ ဦ များအတွက်အထူးမီး။ အရက်ဆိုင်၊ ကခုန်ခန်းမများစသည့်ဖျော်ဖြေရေးနေရာများရှိလေထုအလင်းရောင်။